Ogaden News Agency (ONA) – Hanaanka Wax Hagida Kuhaboon Xiligan By C/lahi C/ Ibraahim.
Hanaanka Wax Hagida Kuhaboon Xiligan By C/lahi C/ Ibraahim.
Posted by Dulmane	/ January 8, 2019
Isdhex-galka dhinaca amuuraha siyaasadeed ee wakhtigan waa mid yeelan kara wajiyo dhawr ah, taasi oo ku sarjarnaan karta hadba danaha joogtada ah ee siyaasadu yeelan karto, halka ayna yeelan karin sxb joogta ah!
Waagan baryay ifafaalihiisu waa mid yididiilo wanaagsan wata, hasa yeeshee in u xaglisa dhanka bidixna way jiri karaan kuwaas oo u baahan inay helaan surgintooda ku haboon. Waxaa hubaal ah in ka shacab ahaan Bulsho waynta Soomaalida Ogaadeeniya ay taageero wayn u hayaan Ururka xaqa iyo Aayaha Ummadeena u taagan Ee ONLF si Aqlabiyad ah oo kalsooni buuxa wadata.
Maalmahan booqashada ay ku joogaan masuuliyiinta JWXO ee uu horkacayo Gudoomiyuhu Admiral: Maxamad Cumar Cusmaan magaalada Diridhaba, waa mid ka run sheegaysa wadajirka iyo xaqiijinta danaha ummadan oo lagu soo kala dhex-jirijiray; si ayna meel ugaadhin taasina Alle mahadii maanta way soo afjarantay.
Maamuladii macangaga ahaa ee Itoobiya soo maamul jiray waxay ahaayeen kuwo baalmarsan xaqiiqada dhabta ah, guulna waxaa la gaadhaa markii runta la isu sheego laguna dhaqmo. Isu dheelitirnaanta dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasaduba waa mid udub dhexaad u ah isla jaanqaadka saxda ah dhankay doontaba ha noqotee.
Markasta guusha waxaa iska leh idam Alle Xaqa iyo Ehelkiisa wax baal marin karana ma jiraan. Baryo samaadkii dhulku barwaaqada ahaan jiray ee dhaqashada nimcoolayda xoolaheena bulshadeena sida fiican u jiri jirtay waxay dhihi jireen rabbina u aqbalijiray “Dhaal bari ka soo hilaacaa dhaan loo nageeyaa”
Maanta iyo halka aan soconaa waa mid haysa tubta iyo dhulka ciida san ee aayaha iyo jiritaanka dadkeena.
Cabdullaahi Cabhdi Ibraahim.